ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင်၏ဆွစ်ဇာလန်ဘုရားကျောင်း
စာသား> AUDIO SELECT
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ယုံကြည်ခြင်းအရာသည် WCG သတ်မှတ် > ရှိခိုး
ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေရန် ဖန်ဆင်းထားသော တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မြင့်မြတ်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် လှုံ့ဆော်ခံရပြီး သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းဆီသို့ မြင့်မြတ်သော မိမိကိုယ်ကို ထုတ်ဖော်ခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ယုံကြည်သူသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကြားဝင်ဖျန်ဖြေပေးသော ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရားနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အရာခပ်သိမ်း၌ ဘုရားသခင်ကို နှိမ့်ချစွာ ရွှင်လန်းစွာ ပေးဆောင်သည်ဟုလည်း ဆိုလိုသည်။ ဆုတောင်းခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ဂုဏ်ပြုခြင်း၊ ရက်ရောခြင်း၊ တက်ကြွသောကရုဏာ၊ နောင်တရခြင်းစသည့် စိတ်သဘောထားများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖော်ပြသည်။ (ဂျိုဟန် 4,23; 1. ဂျိုဟန် 4,19; ဖိလိပ္ပိ 2,5နှစ်ဆယ် 1. ဓာတ်ဆီ 2,9စာ-၇; ဧဖက် 5,18စာ-၂၀; ကောလောသဲမြို့ 3,16စာ-၉; ရောမ 5,8-11; ၂၈.၃2,1; ဟေဗြဲ ၁2,28; 13,15-16)
ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပြီးသူလုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဒါကချီးမွမ်းထိုက်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်လူသားအဆင့်တွင်ပင်ဝါကြွားသည်မဟုတ်လော။ အခြားသူများကိုကူညီရန်သူတို့၏အသက်ကိုပေးသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ချီးမွမ်းသည်။ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုကယ်တင်ရန်တန်ခိုးအလုံအလောက်မရှိကြပါ။ သို့သော်သူတို့၌အခြားသူများကိုကူညီရန်သူတို့အသုံးပြုခဲ့သည့်စွမ်းအားသည်ချီးကျူးထိုက်ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကူညီနိုင်စွမ်းရှိသော်လည်းကူညီရန်ငြင်းဆန်သောသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ဝေဖန်သည်။ ကောင်းမြတ်ခြင်းသည်စွမ်းအားထက် ပို၍ ချီးမွမ်းထိုက်သည်၊ ဘုရားသခင်သည်ကောင်းမြတ်ပြီးတန်ခိုးကြီးသည်။
ချီးမွမ်းခြင်းကဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့စပ်ကြားရှိချစ်ခြင်းနှောင်ကြိုးကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ထားသောဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်သည်ဘယ်တော့မျှလျော့နည်းသွားခြင်းမရှိသော်လည်းသူ့အားချစ်သောမေတ္တာသည်မကြာခဏလျော့နည်းသွားသည်။ ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ထားသည့်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူတို့၌ရှိတော်မူသောချစ်ခြင်းမေတ္တာမီးကိုကျွန်ုပ်တို့မီးရှို့ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်အားမည်မျှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ကိုမှတ်မိပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းသည်ကောင်းသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွန်အားရှိစေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းမြတ်ခြင်း၌ကိုယ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးပွားစေသည်၊ ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတိုးပွားစေသည်။
ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်သည် (1. ဓာတ်ဆီ 2,9) ဘုန်းအသရေကို ဆောင်ကြဉ်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ညီညွတ်လေလေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွှင်လန်းမှု ကြီးမားလေလေဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရန် ဖန်ဆင်းထားသည်- ဘုရားသခင်ကို ဂုဏ်တင်သောအခါတွင် ဘဝသည် ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအရာကို ဝတ်ပြုရေးတွင်သာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝလမ်းစဉ်တွင်လည်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကိုးကွယ်ခြင်းသည် ဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်များကို ဘုရားသခင်ထံ ယဇ်အဖြစ် ပူဇော်ကြသည်။2,1စာ-၂)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများနှင့် ဧဝံဂေလိတရားကို ဝေမျှသောအခါ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ကြသည်။5,16) ငွေရေးကြေးရေး ယဇ်ပူဇော်သောအခါ ဘုရားသခင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကိုးကွယ်ကြသည် (ဖိလိပ္ပိ 4,18) တခြားလူတွေကို ကူညီတဲ့အခါ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်တယ်။3,16) သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်၊ အာရုံစိုက်မှုနှင့် သစ္စာစောင့်သိမှုတို့ကို ခံထိုက်သူဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှတစ်ဦးဖြစ်လာခြင်းဖြင့် ကိုယ်တော်၏ဘုန်းအသရေနှင့် နှိမ့်ချမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ချီးမွမ်းပါသည်။ ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ချီးမွမ်းပါသည်။ သူ့ပုံစံနဲ့သူ တကယ်ကို ချီးကျူးတယ်။
ထိုသခင်သည်ငါတို့၏ဘုန်းအသရေကိုထင်ရှားစေ။ ၊ ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်၊ ငါတို့အဘို့အသေခံတော်မူသောအားဖြင့်၊ ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်၊ ထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုငါတို့သည်ချီးမွမ်းသည်မှန်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သစ္စာစောင့်သိမှုနှင့်ဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှုကိုကြွေးတင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းရန် ဖန်ဆင်းခံရပြီး ထာဝရကာလပတ်လုံး ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ယောဟန်သည် အနာဂတ်ရူပါရုံကို ပေးဆောင်ခဲ့သည်– “ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ မြေကြီးအောက်၌ရှိသော သမုဒ္ဒရာ၌ရှိသော သတ္တဝါအပေါင်းတို့ကို ငါကြားရ၏– “ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူသောသူနှင့် သိုးသငယ်ဖြစ်ပါစေသော။ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ဂုဏ်ပြုခြင်း၊ (ဧပီဖန်နီ 5,13) ဤသည်မှာ မှန်ကန်သော အဖြေဖြစ်သည်- ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေခြင်း၊ ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေခြင်း၊ ယုံကြည်ထိုက်သူကို သစ္စာစောင့်သိခြင်း။
ဆာလံ ၃3,1ဖြောင့်မတ်သောသူ၊ ထာဝရဘုရား၌ ဝမ်းမြောက်ကြလော့။ ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ချီးမွမ်းပါစေ။ ထာဝရဘုရားအား စောင်းတီး၍ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းကြလော့။ ကြိုးဆယ်ချောင်းဖြင့် ထောမနာသီချင်းဆိုကြလော့။ သူ့အား သီချင်းအသစ် သီဆိုပါ။ ပျော်ရွှင်တဲ့အသံနဲ့ ကြိုးတွေပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းကစားတယ်။" စောင်း၊ ပုလွေ၊ တီးဝိုင်း၊ တံပိုးနှင့် လင်းကွင်းတို့ကို အသုံးပြုရန်၊ ရွှင်လန်းအားတက်စေရန်၊ ထာဝရဘုရားအား သီချင်းအသစ်ကို သီဆိုရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ညွှန်ကြားထားသည် (ဆာလံ ၁၄၉-၁၅၀)။ ထိုရုပ်ပုံသည် ဆီးတားခြင်းမရှိဘဲ ထုတ်ဖော်ပြသသော ပျော်ရွှင်မှု၏ ရွှင်လန်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာကအလိုအလျောက်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပမာများကိုဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်ရာစုနှစ်များစွာတည်ရှိနေသောပုံမှန်ပုံစံများနှင့်အတူအလွန် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်မှုပုံစံများကိုဖော်ပြထားသည်။ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်မှုပုံစံနှစ်မျိုးလုံးသည်တရားမျှတနိုင်ပြီးဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုလည်းမပြောနိုင်ပါ။ ငါကိုးကွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောယေဘုယျအခြေခံမူပြန်လည်ကြည့်ရှုချင်တယ်။
1. ကိုးကွယ်ဖို့ ခေါ်တယ်။
ပထမဦးစွာ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်အား ကိုးကွယ်စေလိုပါသည်။ ဤသည်မှာ ကျမ်းဂန်အစမှအဆုံးတိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့မြင်နေရသော ကိန်းသေတစ်ခုဖြစ်သည်။1. ကြွက် 4,4; ယော 4,23; ဗျာဒိတ် ၂2,9) ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ဝေါ်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်- ဘုန်းကြီးသော အကျင့်ကို ကြွေးကြော်ရန်၊1. ဓာတ်ဆီ 2,9) ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဟာ သူ့ကို ချစ်ပြီး နာခံရုံတင်မကဘဲ သီးခြားဝတ်ပြုမှုတွေကိုလည်း ကျင့်သုံးကြတယ်။ ယဇ်ပူဇော်ကြ၊ ချီးမွမ်းသီချင်းဆိုကြ၊ ဆုတောင်းကြကုန်၏။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် ကိုးကွယ်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်းတွင် အသေးစိတ်အချက်များစွာကို ဖော်ပြထားသည်။ အချို့သောလူများသည် အချို့သောနေရာများတွင် အချို့သောအချိန်များတွင် အလုပ်များပေးကြသည်။ ဘယ်သူ ၊ ဘယ် ၊ ဘယ် ၊ ဘယ်နေရာ ၊ ဘယ်လို တွေ ကို အတိအကျ ဖော်ပြ ထား ပါ သလဲ ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်တော့ ကျနော်တို့ မြင်ပါတယ်။ 1. ဘိုးဘေးများကို ကိုးကွယ်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ မောရှေကျမ်းတွင် စည်းကမ်းချက် အလွန်နည်းပါးသည်။ ၎င်းတို့တွင် ခန့်အပ်ထားသော ယဇ်ပုရောဟိတ်ရာထူးမရှိ၊ သီးခြားနေရာတစ်ခုတွင် အကန့်အသတ်မရှိ၊ ယဇ်ပူဇော်ရမည့်အရာနှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် ပူဇော်ရမည်ကို လမ်းညွှန်မှုအနည်းငယ်သာ ရရှိခဲ့သည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်မည်သည့်အချိန်၌ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်တွေ့ရသည်။ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်မှုသည်မည်သည့်အုပ်စုနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မျှမကန့်သတ်ထားပါ။ ခရစ်တော်သည်မောရှေ၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကိုပယ်ရှားခဲ့သည်။ ယုံကြည်သူအားလုံးသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်များဖြစ်ကြပြီး၊
2. ဘုရားသခင်ကိုသာ ကိုးကွယ်သင့်သည်။
၀ တ်ပြုကိုးကွယ်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိလင့်ကစားသမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးကိုဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာကိုးကွယ်သင့်သည်။ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာကိုးကွယ်မှုသည်သီးသန့်ဖြစ်ရမည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသမျှ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သစ္စာစောင့်သိမှုအားလုံးကိုတောင်းဆိုသည်။ ငါတို့ဘုရားနှစ်ပါးအစေကိုမခံနိုင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ကိုးကွယ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏စည်းလုံးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သောသူဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
ရှေးခေတ်အစ္စရေးအချိန်မှာပြိုင်ဘက်ဘုရားသခင်ဟာဗာလဖြစ်တယ်။ ယေရှုခေတ်တွင်ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာများ၊ မိမိကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ခြင်းနှင့်အရေခြုံမှုတို့ဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဘုရားသခင်ကြားရှိအရာအားလုံး - သူ့အားမနာခံစေသည့်အရာမှန်သမျှသည်မှားယွင်းသောဘုရား၊ ဒီနေ့လူတချို့အတွက်ပိုက်ဆံပဲ။ အခြားသူများအတွက်မူ၎င်းသည်လိင်ဖြစ်သည်။ အချို့မှာမာနကြီးခြင်းနှင့်ပြbiggerနာပိုကြီးမားသည်သို့မဟုတ်အခြားသူများကသူတို။ ၏ထင်မြင်ပုံကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ ဂျွန်သည်သူရေးသောအခါမှားယွင်းသောနတ်ဘုရားအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
«Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit» (1. ဂျိုဟန် 2,15-17) ။
ငါတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်၊ သတ်ပစ်ရမယ်၊ မှောက်မှားသောဘုရားအားလုံးကိုဖယ်ပစ်ရမယ်။ ဘုရားသခင်အားနာခံခြင်းမှတစ်စုံတစ်ရာကတားဆီးထားပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုသူ့ကိုတစ်ယောက်တည်းဝတ်ပြုစေချင်တယ်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသော ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သော တတိယအဆက်မပြတ်မှာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုသည် စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ဖြစ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ်မချစ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ်မချစ်ပါက မှန်ကန်သောသီချင်းများ သီဆိုခြင်း၊ မှန်ကန်သောနေ့ရက်များတွင် စုဝေးခြင်းအတွက် တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အသုံးမ၀င်ပါ။ ဘုရားသခင်ကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဂုဏ်တင်သူများကို ယေရှု ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သော်လည်း သူတို့၏စိတ်နှလုံးသည် ဘုရားသခင်နှင့် မနီးစပ်သောကြောင့် အချည်းနှီးသာ ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ (မူလက ၎င်းတို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုကို ဖော်ပြရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း) သည် စစ်မှန်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ဝတ်ပြုရေးအတွက် အတားအဆီးများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်အား စိတ်ဝိညာဉ်နှင့် သစ္စာရှိရှိကိုးကွယ်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူသောအခါ ဖြောင့်မတ်ခြင်းလိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ယေရှု အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည် (ယော 4,24) ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း သူ၏ ညွှန်ကြားချက်ကို အမှန်တကယ် ဒေါသထွက်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြောင်သူတော်များဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏အခွင့်အာဏာထက် ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားပါက ကိုယ်တော်ကို အမှန်တကယ်ကိုးကွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ပဋိညာဉ်တော်ကို ငါတို့နှုတ်နှင့် ငါတို့နောက်သို့ စွန့်ပစ်၍ မရနိုင်။ (ဆာလံ ၅၀း၁၆-၁၇)။ ငါတို့က သူ့ကို သခင်လို့ ခေါ်ပြီး သူပြောတာကို လျစ်လျူရှုလို့ မရဘူး။
စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေးတွင်နာခံခြင်းပါ ၀ င်ရမည်ဟုကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးတွင်တွေ့ရသည်။ ဤနာခံမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းပြုမူဆက်ဆံပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင့်စကားများပါ ၀ င်ရမည်။
Wir können Gott nicht ehren, wenn wir seine Kinder nicht ehren. «Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie er kann er Gott lieben, den er nicht sieht?» (1. ဂျိုဟန် 4,20စာ-၂၁)။ လူမှုရေးမမျှတမှုတွေကို ကျင့်သုံးရင်း ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို ဟေရှာယရဲ့ ရက်စက်စွာ ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကို အမှတ်ရစေပါတယ်-
"မင်းရဲ့ သားကောင်တွေ အများကြီးကို မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။ သိုးထီး၊ ဆူအောင်ကျွေးသော နွားသငယ်ဆီဥကို မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် ပြည့်၍၊ နွား၊ သိုးသငယ်၊ မင်း ငါ့ရှေ့မှာ လာပြရင် ငါ့တရားရုံးကို လျှောက်ခိုင်းမှာလား။ အချည်းနှီးသော ဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာများကို နောက်တဖန် မပြုပါနှင့်။ နံ့သာပေါင်းကို မုန်းတယ် လဆန်းနှင့် ဥပုသ်နေ့တို့၊ သင်တို့သည် စည်းဝေးသောအခါ၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့် ပွဲလမ်းသဘင်တို့ကို ငါမကြိုက်။ ငါ့ဝိညာဉ်သည် သင်၏လဆန်းပိုင်းများနှင့် နှစ်စဉ်ကျင်းပသော ပွဲတော်များအတွက် ရန်လိုပါသည်။ သူတို့သည် ငါ့အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေ၍ ထမ်းရတာ ပင်ပန်းလှပြီ။ သင်သည် လက်ကိုဆန့်သော်လည်း၊ ငါသည် မျက်စိကို ကွယ်ထားမည်။ အများကြီး ဆုတောင်းရင်တောင် မကြားရသေးဘူး။ အကြောင်းမူကား၊ သင်၏လက်တို့သည် အသွေးနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏” (ဟေရှာယ 1,11-15) ။
ငါတို့သိသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ဤလူတို့ထားရှိသည့်နေ့ရက်များသို့မဟုတ်နံ့သာပေါင်းအမျိုးအစားများသို့မဟုတ်သူတို့စွန့်လွှတ်ခဲ့သည့်တိရစ္ဆာန်များနှင့်ဘာမျှမမှားပါ။ အဆိုပါပြproblemနာကိုသူတို့ကျန်ကြွင်းသောနေထိုင်ခဲ့လမ်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ “ မင်းလက်တွေကသွေးတွေပြည့်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကလူသတ်မှုကျူးလွန်သူတွေသာမဟုတ်တာသေချာတယ်။
ပြီးပြည့်စုံသော အဖြေတစ်ခုကို တောင်းဆိုခဲ့သည်– "မကောင်းမှုမှ လွတ်ကင်းရန်၊ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်ရန်၊ တရားမျှတမှုကို ရှာဖွေရန်၊ အဖိနှိပ်ခံများကို ကူညီရန်၊ မိဘမဲ့ကလေးများကို တရားမျှတစေရန်၊ မုဆိုးမများအတွက် ဦးဆောင်လမ်းပြရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ (း၁၆-၁၇)။ လူအချင်းချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို စနစ်တကျ ထားရပါမယ်။ လူမျိုးရေး မလိုမုန်းထားမှု၊ လူမှုရေး အဆင့်အတန်းနှင့် မမျှတသော စီးပွားရေး အလေ့အထများကို ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။
အမှန်တကယ်ဖြစ်လိုလျှင် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်မှုသည်တစ်ပတ်လျှင်ခုနစ်ရက်အပြန်အလှန်ပြုမူဆက်ဆံပုံကိုထူးခြားစေရမည်။ ဒါကကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့နောက်မူတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ငါတို့ဘယ်လိုဝတ်ပြုသင့်သလဲ Micha ကဒီမေးခွန်းကိုမေးပြီးအဖြေပေးတယ်။
“သခင်ဘုရားထံတော်သို့ မည်သို့ချဉ်းကပ်ရမည်နည်း။ မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် တစ်နှစ်သားအရွယ် နွားသငယ်တို့ကို ချဉ်းကပ်သင့်သလော။ မရေမတွက်နိုင်သော ရေနံမြစ်များတွင် ထာဝရဘုရားသည် သိုးထီးထောင်ပေါင်းများစွာကို နှစ်သက်တော်မူမည်လော။ ငါ့အပြစ်အတွက် ငါ့သားဦးကို ပေးသင့်သလော။ အချင်းလူသား၊ ကောင်းမြတ်သောအရာနှင့် သခင်ဘုရားသည် သင့်ထံတော်၌ တောင်းသောအရာဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို စောင့်ထိန်းရန်နှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကျင့်ဆောင်ရန်၊ သင်၏ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ နှိမ့်ချခြင်းရှိရန်၊ 6,6-8) ။
လူ့ဆက်ဆံရေးသည် ဝတ်ပြုရေးစက်ပြင်ထက် ပို၍အရေးကြီးကြောင်း ဟောရှေက အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ “ငါသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို နှစ်သက်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို မနှစ်သက်သောကြောင့်၊ မီးရှို့ရာယဇ်ကို မပြုဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ချီးမွမ်းရန်သာမက ကောင်းသောအကျင့်များကိုပါ ခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသည် (ဧဖက် 2,10).
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာအယူအဆသည်တေးဂီတနှင့်နေ့များထက်ကျော်လွန်သွားရမည်။ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူနေမှုပုံစံကဲ့သို့နီးပါးအရေးမကြီးပါ။ ညီအစ်ကိုများအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမျိုးကိုကြဲစဉ်ဥပုသ်စောင့်ခြင်းသည်ဟန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာဆာလံသီချင်းသီခငျြးဆိုရုံနဲ့သူတို့ဖော်ပြရန်လမ်းကိုကိုးကွယ်ဖို့ငြင်းဆန်ဖို့ဟန်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်နှိမ့်ချခြင်း၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သောလူ့ဇာတိခံယူခြင်း၏ဂုဏ်ပြုခြင်းသည်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ကရုဏာကိုမရှာလျှင်ယေရှုကိုသခင် ဟူ၍ ခေါ်ခြင်းသည်ဟန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ပြင်ပလုပ်ရပ်များထက်မကပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြောင်းအလဲအားလုံး၏နှလုံးသားပြောင်းလဲမှု၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်မှဖြစ်ပေါ်စေသောအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်ဆုတောင်းခြင်း၊ လေ့လာခြင်းနှင့်အခြားဝိညာဉ်ရေးရာစည်းကမ်းများ၌ဘုရားသခင်နှင့်အချိန်ပေးလိုသည်။ ဤပြောင်းလဲခြင်းသည်မှော်စကားများသို့မဟုတ်မှော်ရေများဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၌အချိန်ဖြုန်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်သည်။
၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါလု၏ကျယ်ပြန့်သောအမြင်
ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ အထူးသဖြင့် ပေါလု၏စကားများတွင် ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ပေါလုသည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်း (ကိုးကွယ်ခြင်း) ဟူသောဝေါဟာရကို အောက်ပါအတိုင်းအသုံးပြုခဲ့သည်– “ယခုအခါ၊ ချစ်လှစွာသောညီအစ်ကိုတို့၊ အသက်ရှင်၍ သန့်ရှင်း၍ ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသော ပူဇော်သက္ကာအဖြစ် သင်၏အလောင်းကိုပူဇော်ရန် ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်အားဖြင့် သင့်အား တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဝတ်ပြုရေးဖြစ်ပါစေ” (ရောမ ၁2,1) တစ်သက်တာလုံး အပတ်တိုင်း နာရီအနည်းငယ်မျှသာမဟုတ်ဘဲ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန် ဆည်းကပ်ပါက၊ အပတ်တိုင်း အခြားခရစ်ယာန်များနှင့် နာရီအနည်းငယ်ပါဝင်ရမည်မှာ သေချာပါသည်။
ရောမ ၁ တွင် ပေါလုသည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်းအတွက် အခြားစကားလုံးများကို အသုံးပြုသည်။5,16ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော ကျေးဇူးတော်အကြောင်းပြောသောအခါ “ငါသည် တပါးအမျိုးသားတို့တွင် ယေရှုခရစ်၏ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ တပါးအမျိုးသားတို့သည် ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသော ပူဇော်သက္ကာဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် ဧဝံဂေလိတရားကို ညွှန်ပြစေခြင်းငှါ၊ ဝိညာဉ်။" ဤတွင် ဧဝံဂေလိတရားကို ကြေငြာခြင်းသည် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့မြင်သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ငါတို့ကို ခေါ်သောသူတို့၏ အကျိုးကျေးဇူးကို ဟောပြောခြင်းငှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်၌ တာဝန်ရှိသည် (1. ဓာတ်ဆီ 2,9) - အခြားသူများကို ဧဝံဂေလိတရားဟောရာတွင် ကူညီပေးခြင်းဖြင့် အသင်းဝင်မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးပါဝင်နိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု။
ပေါလုသည် ဖိလိပ္ပိမြို့သားများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိသောအခါ၊ “သင်တို့ထံမှလာသောအရာကို ဧပဖြောဒိတ်ထံမှ ငါရခဲ့ပြီး၊ ချစ်စရာကောင်းသောအနံ့၊ သာယာသောပူဇော်သက္ကာကို ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသည်” (ဖိလိပ္ပိ)၊ 4,18).
အခြားခရစ်ယာန်များကို ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ငွေကြေးအကူအညီသည် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၁၃ တွင် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ချီးမွမ်းခြင်းခံရသည့်အကြောင်း ဖော်ပြသည်– “ထိုကြောင့်၊ နာမတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော နှုတ်ခမ်းအသီးတည်းဟူသော ကိုယ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို အစဉ်ချီးမွမ်းကြကုန်အံ့။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရန် မမေ့ပါနှင့်။ ထိုသို့သောယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသည်” (း၁၅-၁၆)။
ဝတ်ပြုရေးကိုနေ့စဉ်နာခံခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းတို့ပါ ၀ င်သောဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါကဂီတနှင့်နေ့ရက်များကိုကြည့်သောအခါကျွန်ုပ်တို့တွင်ပိုမိုကောင်းသောရှုထောင့်ရှိသည်ဟုထင်မြင်သည်။ တေးဂီတသည်အနည်းဆုံးဒါဝိဒ် အချိန်မှစ၍ ဝတ်ပြုရေး၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော်လည်းဂီတသည်ဝတ်ပြုရေး၏အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းမဟုတ်ပါ။
အလားတူပင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုပင် ၀ တ်ပြုရာနေ့သည်အိမ်နီးချင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုမူဆက်ဆံသကဲ့သို့အရေးကြီးသည်မဟုတ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ ပcovenantိညာဉ်တရားသစ်သည်ဝတ်ပြုရေးအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေ့တစ်ရက်မလိုအပ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အချင်းချင်းချစ်သောလက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည်။ သူကကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံရန်တောင်းဆိုသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အချိန်တွင်တွေ့ဆုံသင့်သည်ကိုမူသူမသတ်မှတ်ထားပါ။
ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန်၊ ဂုဏ်တင်ရန်၊ ဂုဏ်တင်ရန်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရသူများ၊ ငါတို့၏ကယ်တင်ခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်၎င်း၊ ငါတို့အတွက်သူလုပ်ပေးခဲ့သည့်အရာများအားသူ၏ကောင်းချီးများကိုကြေညာခြင်း၊ သတင်းကောင်းကိုအခြားသူများအားဝေငှခြင်းက ၀ မ်းမြောက်သည်။